Fanahy no olona – Tahala fikoloana ny fanahy – Blaogin'i Voniary
Vatana, saina, fo ary fanahy no mandrafitra ny olombelona. Ny Ntaolo Malagasy dia nahatsapa fa « ny fanahy no olona » ary hita taratra tamin’ny fiainany andavanandro izany. Te-hamerina io fahendrena nentin-drazana io Andriantsimiavona Christian ka izany no antony nanaganany ity toerana hafa kely ity. Ndeha ary ho fantarintsika bebe kokoa ao anatin’ity lahatsoratra ity ny tahala Fanahy no olona.
Inona moa ity tahala Fanahy no olona ity ?
Efa taona maro lasa izay no nanangana ny tahala Fanahy no olona eny Andohatanjona Andriantsimiavona Christian niaraka tamin’i dokotera Gilles ka Sekoly Ambony Fanahy no Olona na hoe SAFO no fiantsony azy tamin’izany. Nony nodimandry ity farany taty aoriana dia nangingina teny ny tahala saingy ny foto-kevitra nijoroany kosa mbola velona.
Tahala Fanahy no olona, avy ety ivelany (sary indrana)
Teny antsefatsefany teny, nanatanteraka famelabelaran-kevitra manoloana vondron’olona maro toy ny tany amin’ny polisim-pirenena sy ny BIANCO Andriamatoa Christian. Fanampin’izany dia nivahiny tamin’ny fandaharana eny anivon’ny onjam-peo maro samihafa ihany koa izy. Efa nisy koa ny Tsenan-kevitra kolo hasina niarahana tamin’ny foiben’ny teny an’ny Akademia Malagasy tao amin’ny tahala rarihasina nanomboka tamin’ny taona 2012.
Amin’izao fotoana izao, te-hamelona sy hampiroborobo ny tahala Fanahy no olona indray ny lehilahy.
« Ankehitriny, tonga ny fotoana ! Fotoana izao, ahatsapan’ny Malagasy tena ary hahalalany ny tena fahendrena mifototra avy amin’ny fanahy no olona. Mifandraika amin’izay indrindra ilay fanambaran’ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hoe « fotoana hiverenan’ny hasin’i Madagasikara ity 2019 ity ! »
hoy ny fanazavan’Andriantsimiavona Christian.
Inona ary no hita ao amin’io toerana io ?
Ao amin’io tahala Fanahy no olona io dia fampitana fahalalana aloha no dingana voalohany mba ho resy lahatra ny olona amin’ny hasarobidin’ny fanahy. Avy eo, misy fihetsika atao mifanaraka amin’izany ohatra hoe fierem-panahy na fanatanterahana aina tony. Mba ho fanomezana vahana ilay fanahy ao anaty no anton’izany rehetra izany.
Tahala Fanahy no olona avy ao anatiny (sary indrana)
Tiana atsikafona manokana fa tsy misy fianianana ary tsy misy fanerena ny fianarana sy ny fivondronana ao amin’ny tahala fa miankina amin’ny nahim-pon’ny tsirairay sy ny fahatsiarovan-tenany amin’ny fivoarana maha-olona.
Inona no tanjon’ny tahala Fanahy no olona ?
Ny tanjona voalohany dia mba hahatonga ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay amin’ny « fanahy no olona » ka ahatsapany fa sarobidy izy , hasina izy ary ilaina izy.
« Satrinay ny hitondrany izany eo amin’ny fiainany andavanandro. Mba ho tonga sekoly mandehandeha ny olona tsirairay »
Hoy ity mpanorina ny tahala Fanahy no olona.
Ny tanjona faharoa dia ny famerenana ny fifampitokisana eo amin’ny samy olombelona na inona saranga na inona sokajy misy azy ary indrindra eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka.
« Ny fifanajana no hananan-kasina, ny hasina no miteraka hery, ny hery no mitondra fahefana ary ny fahefana no itondrana fanjakana. Dia Fanjakana manana hazon-damosina, mijoro amin’ny maha-izy azy ary manome aina ny mpiara-monina ».
Hoy ihany Andriantsimiavona Christian.
Inona no nahatonga ilay anarana hoe « Fanahy no olona » ?
Samy manana ny fahendreny avy ny firenena rehetra eto an-tany. Ny yoga ohatra dia fomba iray nampiasain-dry zareo Hindoa hampipoirana ilay fanahy no olona amin’ny alalan’ny famolahan-tena. Amin’ny sinoa indray, amin’ny alalan’ny Kung Fu sy ny Qi Gong no hamoahany ilay fanahy no olona.
Amin’ny Malagasy kosa tonga dia fanomezam-pahasoavana avy hatrany izy io raha zohina ilay fitenenana hoe « ny fanahy no olona ». Io no noraisin’ny mpanorina ho anarana sy foto-kevitra ijoroan’ny tahala. Izany hoe avy amin’ny fahendrena sy soatoavina malagasy no itrandrahana sy itaizana ny fanahy.
Andriantsimiavona Christian manatanteraka fierem-panahy (sary indrana)
Miainga amin’ny hoe « aza ny lohasaha mangina no jerena fa Zanahary ao an-tampon’ny loha ». Io no mahatonga ny olona tsirairay ahatsapa fa misy fanahy ao aminy ary mitovy lenta ny olombelona rehetra satria samy zanak’Andriamanitra. Io ilay antsoin’ny Malagasy hoe hasina ary izany koa no nitarika ny Ntaolo hanao ny marina, ny rariny, ny hitsiny ary hino ny tsiny sy ny tody. Ny fanavahana ny tsara sy ny ratsy avy amin’ireo foto-pisainana ireo no niteraka ny fomba sy ny fady. Fanampin’izany « ny olona ihany no biby mifanaja ». Ny fifanajana izany no vontoatin’ny fanahy maha-olona.
Fanirian’ity filoha mpanorina ny tahala Fanahy no olona ity ny hizarana ny rivotra tsara amin’ny rehetra sy vondron’olona isan-karazany. Noho izany, misokatra amin’ny izay mety ho endrika fiaraha-miasa sy fanampiana isan-karazany izy.
Raha mahaliana anao ny foto-kevitra Fanahy no olona na maniry ny hiara-hiasa sy hanampy ny tahala ianao dia azonao atao ny mitafa mivantana amin’Andriantsimiavona Christian ao amin’ny : 034 61 856 95 na 033 14 625 02.
ésotérisme gasy, fahendrena malagasy, fampivelarana ny maha-olona, fanahy no olona, fierem-panahy, soatoavina malagasy